बारीमा पैसा फल्यो - तरकारी खेती » खबरहरुको एउटै केन्द्र
बारीमा पैसा फल्यो – तरकारी खेती
बुधबार, बैशाख २०, २०७४ ०७:३७ मा प्रकाशित !
फिदिम, वैशाख २० गते । फिदिम नगरपालिका क्षेत्रका किसानलाई तपाइँको बारीमा के छ भनेर प्रश्न ग¥यो भने ‘बजार’ लगाएको छ भनेर उत्तर दिने गरेका छन् । बारीमै पुगेर हेर्ने हो भने रमितै लाग्ने गरी बजार लगाएको पनि देखिन्छ । बारीमा लगाएको तरकारी तथा मसला खेतीले प्रत्यक्ष रूपमा बजारसँग सम्बन्ध राख्ने भएपछि त्यसलाई किसानले बजार भन्ने गरेका हुन् । थोरै जग्गाबाट व्यावसायिक रूपमा अधिकतम आम्दानी लिन सकिने थाहा पाएपछि किसान बारीमा बजार लगाउन उत्साहित बनेका हुन् । यहाँका किसानले अन्य क्षेत्रका किसानलाई समेत बारीमा बजार लगाए अरु बालीभन्दा धेरै आम्दानी हुने सल्लाह दिन्छन् । किसानले रायो, काउली, ब्रोकाउली, मटर, टमाटर, धनियाँ, प्याज, लसुन, मुला, गाँजर, आलु, सिमीलगायत मसला तथा तरकारी लगाउने गरेका छन् । दङ्गाल गाउँ, साम्दिन, ठाडे, डुम्ब्रीबोटे, तालखर्क, मजिटे, लालीखर्क, दुमा, मालवासे, नाम्दुलगायतका दर्जनौँ गाउँमा किसानले बारीमा मौसमी÷बेमौसमी बजार लगाउने गरेका हुन् । यसबाट परम्परादेखि उत्पादन गर्दै आएको मकै कोदो लगायतका बालीभन्दा धेरै फाइदा हुने किसान बताउँछन् । २०७२ मा राष्ट्रपति पुरस्कार समेत पाउनुभएका साम्दिनका चुँडामणि काफ्लेले वार्षिक दस लाख रुपियाँसम्म तरकारीबाट आम्दानी गरिरहनुभएको छ । दुमाकी किसान नरमाया गुरगाईँले तरकारीबाट वार्षिक दुई लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको सुनाउनुभयो ।
यस क्षेत्रका किसान तरकारी खेती गरेपछि ‘पैसाको अनुहार देख्न पाइएन’ भन्ने दिन जाने बताउँछन् । तरकारी खेती थालेदेखि दैनिकजसो पैसा थाप्न पाउँदा छुट्टै आनन्द हुने गरेको डुम्ब्रीबोटेका भवानी काफ्लेले सुनाउनुभयो । राम्रो आम्दानी हुने देखेपछि कतिपय किसानले महँगोमा जग्गा भाडामा लिएर पनि तरकारी खेती गरिरहेको पाइएको छ । उत्पादित तरकारी किसानले फिदिम बजार लगेर बेच्ने गरेका छन् । कतिपय ग्राहक तथा व्यापारीले किसानको बारीमै पुगेर सागसब्जी किन्ने गरेका छन् । कहिलेकँही ग्राहक तथा व्यापारीको घुइँचो लाग्दा हरियालीयुक्त आफ्नो बारीको सानै छुट्टै हुने गरेको किसान सुनाउँछन् । आफ्नो बारीमा सागसब्जी लगाए मात्रै फिदिमको साप्ताहिक तरकारी बजार समेत लाग्ने नभए बजार नै नलाग्ने यहाँका किसान दाबी गर्छन् । त्यसैले आफ्नो बारीलाई गौरवका साथ बजारका रूपमा अथ्र्याउने गरेको किसान बताउँछन् ।
किसानलाई ऋण दिएर तरकारी खेतीमा प्रोत्साहित गरिरहेको फिदिमको हातेमालो कृषि सहकारी संस्थाका ऋण सहायक हेमन्त अधिकारीले बताउनुभयो । यस क्षेत्रका सामान्य आर्थिक अवस्थाका धेरै किसान तरकारी बेचेरै घर जग्गा जोड्न सक्ने लखपति बनेका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: काँग्रेसबाट सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवारी हुने
NEXT POST Next post: सबै विद्यालयहरु वैशाख २५ देखि ३१ सम्म बन्द हुने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, बैशाख २०, २०७४ ०७:३७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, बैशाख २०, २०७४ ०७:३७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, बैशाख २०, २०७४ ०७:३७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, बैशाख २०, २०७४ ०७:३७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, बैशाख २०, २०७४ ०७:३७